မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ဖော်ဆောင်နေသည့် အလျောက် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြည်သူဗဟိုပြုနည်းလမ်း ကျင့်သုံးရန်၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်ညီစေရန်၊ အရည်အချင်းပြည့်မှီစေရန် ဆိုသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပိုမိုလိုအပ်လာသည်ကို မျက်မြင်တွေ့ရှိရသည်။ လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ၁ သန်းကို မြန်မာပြည်သူများအတွက် ထိရောက်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန် အလေးပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
UNDP သည် ဩစတေးလျ၊ ဆွိဒင်၊ နယူးဇီလန်တို့ နှင့်အတူပူးပေါင်းလျက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး တွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လမှ စတင်၍ ဩစတေးလျအစိုးရ၊ နယူးဇီလန်အစိုးရ၊ ဆွီဒင်အစိုးရ တို့၏ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကဏ္ဍ၏ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ထိရောက်မှု၊ လိုက်လျောညီထေွ ဖြစ်စေမှုနှင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုစီမံချက် (LEAP) ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် အောင်မြင်မှုရလဒ်ကောင်းများ ရရှိပါသည်။
ပြီးခဲ့တစ်နှစ်ဝက်ကျော်က အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အောင်မြင်မှုများကို ဤဗီဒီယိုအတိုလေးတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
“မြန်မာပြည်အပူပိုင်းဒေသရှိ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအပေါ် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ ဘေးအန္တရာယ်အလားအလာများအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း”
လူထုအခြေပြု သယံဇာတစီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် မြန်မာပြည်အပူပိုင်းဒေသ နယ်ခံလယ်သမားများ၏ ထိခိုက်ခံရလွယ်မှုအား လျော့ချရေး ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုအား ဖော်ဆောင်ရန် သယံဇာတ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အတူ UNDP က လိုက်လျောညီထွေရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ (Adaptation Fund) ၏ ဘဏ္ဍာငွေအထောက်အပံ့ဖြင့် “မြန်မာပြည်အပူပိုင်းဒေသရှိ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအပေါ် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ ဘေးအန္တရာယ်အလားအလာများအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း” စီမံချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။
ရာသီဥတုဘေးအလားအလာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေမှု တိုးတက် ပြောင်းလဲလာခြင်း
နိုင်ငံ့လူဦးရေ၏ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း နေထိုင်သော မြန်မာပြည်အပူပိုင်းဒေသမှ တောင်သူ ကိုဇော်ဌေးမှာ လူငယ်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည့်အပြင် သူ၏ ကျေးရွာတွင် မိုးလေဝသတင်းကြေညာသူတဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှင်သန်ရမည့် တောင်သူလယ်သမားများအတွက် သတင်းအချက်အလက် လက်လှမ်းမှီရေးမှာ အသက်ကယ်ဆေးပင်ဖြစ်သည်။ တိကျမှန်ကန်သော မိုးလေဝသ အချက်အလက်များကြေညာပေးနိုင်ရန် နောက်ဆုံးရ အရေးကြီးမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ ပေးသည့် ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းတခုဖြစ်သော SESAME ကို သူက အသုံးပြုသည်။ ထိုအက်ပလီကေးရှင်းကို UNDP က မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဦးစီးဌာန ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ ဖန်တီးရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုး (Google Play Store) မှ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲယူနိုင်သည်။
ရာသီဥတုဒဏ်ခံ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး အလေ့အကျင့်များ
ရာသီဥတုဒဏ်ခံ စိုက်ပျိုးရေးအလေ့အကျင့်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှု၏ အကျိုးကျေးဇူးကို အိမ်ထောင်စု ၃၁၀၈၅ က လည်းကောင်း ရာသီဥတုဒဏ်ခံမွေးမြူရေး တိရစ္ဆာန်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှု၏ အကျိုးကျေးဇူးကို အိမ်ထောင်စု ၇၂၄၇ တို့ကလည်းကောင်း အသီးသီးရရှိခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပူပိုင်းဒေသရှိ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ် တောင်သူ ဒေါ်ဝင်းမေမှာ လွန်ခဲ့သည့် ၁၁ နှစ် လုံးလုံး မိသားစုပိုင်ယာမြေတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ မြင်းခြံမြို့နယ် ကျောက်က္ကံရွာတွင် နေထိုင်သော သူမ၏မိသားစုမှာ မိရိုးဖလာ တသီးစားစနစ်ကို အသုံးပြု၍ ပင်ပြန့်မြေပဲကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးသည်။
“အခုတော့ ယာတကွက်တည်းကနေပဲ တခြားသီးနှံနှစ်မျိုး ထပ်တိုး ရိတ်သိမ်းနိုင်ပြီဖြစ်လို့ ကျမသိပ်ကိုပျော်နေပါတယ်။ သီးနှံတစ်မျိုး မအောင်ရင် ကျန်တဲ့ နှစ်မျိုး ရိတ်သိမ်းလို့ရသေးတယ်လေ။” ပြီးခဲ့သည့်ရာသီအတွင်း ဖြစ်ထွန်းခဲ့သည့်မျိုးစေ့များကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ပြသလျက် ဒေါ်ဝင်းမေက ပြောသည်။
ရာသီဥတုကြောင့် ရေချိုရရှိနိုင်မှုလျော့ကျသွားခြင်းအား တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း
မြန်မာပြည်အပူပိုင်းဒေသ၌ လွန်ကဲအပူချိန်များ နှင့် မိုးလေမမှန်ခြင်းတို့မှာ သတိထားမိ လောက်အောင် မြင့်တက်လာသည့်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုလျော့ကျလာြခင်း နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရည်အသွေးနိမ့်ကျလာသည့် အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
ရေစုပ်စက်ဖြင့်ရေတင်စနစ် (၇၀) ၊ အဝီစိရေတွင်း (၃၂) တွင်း ၊ ကျေးရွာပိုင်မိုးရေလှောင်ကန် (၅၆) ကန် အပါအဝင် အငယ်စား သောက်သုံးရေစနစ်တို့ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အများသုံးရေကန် (၁၃၆) ကန်ကိုလည်း အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး မြေဆီလွှာအရည်အသွေး မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် သောက်သုံးရေထိန်းသိမ်းခြင်း နည်းပညာများအား လက်တွေ့သရုပ်ပြပေးခဲ့ရာ ယခုအခါ ၁၆၀၀ ဟက်တာ အကျယ်အဝန်းရှိ မြေပေါ်တွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
Hackathon နည်းပညာပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၈ - စိမ်းလဲ့မြေအက်ပလီကေးရှင်း
တီထွင်ဖန်တီးမှု နှင့် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများအား တိုက်တွန်းအားပေးရန် ရည်မှန်းချက်ထား၍ အော်ရီဒူးမြန်မာနှင့် UNDP မြန်မာတို့က “အမျိုးသမီးများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင်းအပ်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုး-နည်းပညာ” အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟက်ကာသွန် (Hackathon) ကို ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာတွင် စီစဉ်ကျင်းပခဲ့သည်။ အော်ရီဒူးနှင့် UNDP တို့၏ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းအကူအညီများမှတဆင့် ၎င်းတို့၏ သွင်းအားစုများ အားကောင်းစေရန်နှင့် စွန့်ဦးတီထွင်ပညာဝမ်းစာဖြည့်ရန် အနိုင်ရရှိသော အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့အား အခွင့်အလမ်းများ ပေးခဲ့သည်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ရုပ်လုံးပေါ်စေရန် (incubation) နှင့် အနီးကပ်လမ်းညွှန်ပြသပေးရန် အတွက် Impact Hub က ကူညီသည်။ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့၌ အနိုင်ရ အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့က ၎င်းတို့၏ ဆန်းသစ်တီထွင် အကြံဉာဏ်များအား ထောက်ပံ့ပေးရန် လုပ်ငန်းထူထောင်ကာစ ကုမ္ပဏီများနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် အလားအလာရှိသူများပါဝင်သည့် ပရိသတ်အား ဆွဲဆောင်စည်းရုံးသည်။
ငွေပေးငွေယူပြုခြင်း ၊ အငှားချထားမှု နှင့် သတင်းအချက်အလက်ဝေမျှမှုများအတွက် နည်းပညာ ပလက်ဖောင်းတခု ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် Blind Hat ၏ စိမ်းလဲ့မြေ အဖွဲ့က တောင်သူလယ်သမားများ ၏ သွင်းကုန် နှင့် ဈေးကွက်ဝင်တန်ဖိုးကွင်းဆက်များ (value chains) ပြောင်းလဲတိုးတက်လာ စေရန် ကူညီပေးနေသည်။ ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူအကြား သတင်းအချက်အလက် အချိတ်အဆက် မမိခြင်းကြောင့် ရွှေဘိုနှင့် မန္တလေးမြို့နယ်များမှ ကျေးလက်တောင်သူများအနေဖြင့် ထုတ်ကုန် ၊ အပင်အာဟာရဓါတ်နှင့် စက်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ လိုအပ်သည်များကို ရှာဖွေရာတွင် အခက်အခဲကြုံ နေရသည်။ ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာများ ပါဝင်သော အက်ပလီကေးရှင်းက ကျေးလက်လယ်သမားများအတွက် အကူအညီဖြစ်စေသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် အငှားချမည့် လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများကို ဓါတ်ပုံများတွဲဘက်၍ဖြစ်စေ မက်ဆေ့ချ်တပ်ဘ် (message tab) အသုံးပြုဆွေးနွေးမှုများကဲ့သို့ သတင်းဝေမျှမှုဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ကိရိယာများ အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ ကြော်ငြာရန် ဖြစ်သည်။ Blind Hat က စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရုံးချုပ်ဖွင့်လှစ်ပြီး အထက်ဖော်ပြပါမြို့နယ် ၂ ခုရှိ လူဦးရေ ၂ သိန်း ၄ သောင်းကျော်အား ပစ်မှတ်ထား၍ အက်ပလီကေးရှင်းကို ဖြန့်ချီပြီးဖြစ်သည်။
Hackathon နည်းပညာပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၈ - HearU အက်ပလီကေးရှင်း
တီထွင်ဖန်တီးမှု နှင့် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများအား တိုက်တွန်းအားပေးရန် ရည်မှန်းချက်ထား၍ အော်ရီဒူးမြန်မာနှင့် UNDP မြန်မာတို့က “အမျိုးသမီးများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင်းအပ်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုး-နည်းပညာ” အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟက်ကာသွန် (Hackathon) ကို ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာတွင် စီစဉ်ကျင်းပခဲ့သည်။ အော်ရီဒူးနှင့် UNDP တို့၏ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းအကူအညီများ မှတဆင့် ၎င်းတို့၏ သွင်းအားစုများ အားကောင်းစေရန်နှင့် စွန့်ဦးတီထွင်ပညာဝမ်းစာဖြည့်ရန် အနိုင်ရရှိသော အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့အား အခွင့်အလမ်းများ ပေးခဲ့သည်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ရုပ်လုံးပေါ်စေရန် (incubation) နှင့် အနီးကပ်လမ်းညွှန်ပြသရန် Impact Hub က ကူညီသည်။ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့၌ အနိုင်ရ အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့က ၎င်းတို့၏ ဆန်းသစ်တီထွင် အကြံဉာဏ်များအား ထောက်ပံ့ပေးရန် လုပ်ငန်းထူထောင်ကာစ ကုမ္ပဏီများနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် အလားအလာရှိသူများပါဝင်သည့် ပရိသတ်အား ဆွဲဆောင်စည်းရုံးသည်။ အနိုင်ကျင့်ခြင်း ၊ အနှောင့်အယှက်ပြုခြင်း နှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကဲ့သို့ အလုပ်ခွင်တွင်း မလျော်မကန်ပြုကျင့်ခြင်းများကို HR /စီမံခန့်ခွဲမှု အကြီးအကဲများထံ အမည်မဖော်ဘဲ တိုက်ရိုက်သတင်းပို့နိုင်စေရန် Divas ၏ HearU က ဝန်ထမ်းများအတွက် အကျိုးဆောင် ပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့ မလျော်မကန်ပြုကျင့်မှု၏ သားကောင်များ ကြုံတွေ့ခံစားနေရသည့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ၊ သတ္တိ နှင့် လုံခြုံမှု ကင်းမဲ့ခြင်းတို့ကို စဉ်းစား၍ အမည်လျှိူ့ဝှက် သတင်းပို့မှုစနစ်မှတဆင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် လျင်မြန်ဘေးကင်းသည့် နည်းလမ်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းအားဖြင့် Divas က ထိခိုက်နစ်နာသူဝန်ထမ်းများအား ပံ့ပိုးပေးလိုသည်။ အငြင်းပွါးမှု ၊ တရားတပေါင်ဖြစ်မှု နှင့် မကောင်းသတင်းထွက်ပေါ်ခြင်း စသည့် အန္တရာယ်များနှင့် ဝန်ထမ်းသစ်များခန့်ထားလေ့ကျင့်ပေးရန် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျော့ချပေးနိုင် သည့်အတွက် ဤအက်ပလီကေးရှင်းက ဝန်ထမ်းများအတွက်သာမက အလုပ်ရှင်များအတွက်ပါ အကျိုးပြုသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရေတွက်ထားသော အဖွဲ့အစည်း ပေါင်း ၆၅၃၄၁ ပေါ်အခြေခံ၍ တဖွဲ့လျှင် ဝန်ထမ်း ၄၀ နှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ကာ အသုံးပြုသူပေါင်း ၂၆၁၃၆၄၀ ဦးရှိနိုင်သည်ဟု Divas က ခန့်မှန်းထားသည်။
Hackathon နည်းပညာပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၈ - ဒေါက်တာကြက်အက်ပလီကေးရှင်း
တီထွင်ဖန်တီးမှု နှင့် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများအား တိုက်တွန်းအားပေးရန် ရည်မှန်းချက်ထား၍ အော်ရီဒူးမြန်မာနှင့် UNDP မြန်မာတို့က “အမျိုးသမီးများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင်းအပ်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုး-နည်းပညာ” အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟက်ကာသွန် (Hackathon) ကို ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာတွင် စီစဉ်ကျင်းပခဲ့သည်။ အော်ရီဒူးနှင့် UNDP တို့၏ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းအကူအညီများ မှတဆင့် ၎င်းတို့၏ သွင်းအားစုများ အားကောင်းစေရန်နှင့် စွန့်ဦးတီထွင်ပညာဝမ်းစာဖြည့်ရန် အနိုင်ရရှိသော အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့အား အခွင့်အလမ်းများ ပေးခဲ့သည်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ရုပ်လုံးပေါ်စေရန် (incubation) နှင့် အနီးကပ်လမ်းညွှန်ပြသပေးရန် Impact Hub က ကူညီသည်။ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့၌ အနိုင်ရ အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့က ၎င်းတို့၏ ဆန်းသစ်တီထွင် အကြံဉာဏ်များအား ထောက်ပံ့ပေးရန် လုပ်ငန်းထူထောင်ကာစ ကုမ္ပဏီများနှင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် အလားအလာရှိသူများပါဝင်သည့် ပရိသတ်အား ဆွဲဆောင်စည်းရုံးသည်။
ကြက်မွေးမြူရေးအလေ့အထကောင်းများကို ပုံမှန်အသိပေးပြီး မေးလေ့မေးထမေးခွန်းများအပြင် တဦးချင်းစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအား ဖြေကြားပေးနိုင်သည့် စကားဖလှယ်နိုင်သော ဘော့တ် (chat bot) ကို Deca ၏ ဒေါက်တာကြက်က မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ အားကိုးအားထားပြုနိုင်သည့် အချက်အလက်အစုအဝေး (ဒေတာဘေ့စ်) နှင့် ဘော့တ်အင်ဂျင်၏ သတင်းဝေမျှပေးနိုင်သည့် စွမ်းရည်အသုံးပြု၍ ရောဂါများ နှင့် လိုအပ်သော ကုသမှုများအား ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ၊ မွေးမြူရေးခြံ တွင် ပဋိဇီဝဆေးအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် ၊ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး အလေ့အထကောင်းများကို အားပေးတိုက်တွန်းရန်အတွက် ကျေးလက်လယ်သမားများအား အကူအညီပေးရန် Deca က ရည်မှန်းထားသည်။ လုပ်ကွက်ငယ်ကြက်မွေးမြူရေးသမားများမှာ ကြက်ကောင်ရေ ၅၀၀၀၀ အောက်သာ မွေးမြူကြလိမ့်မည်ဟု ယူဆထား၍ chat bot သုံးစွဲသူများအဖြစ် ၎င်းတို့အား Deca က ပစ်မှတ်ထားသည်။ ကြက်ကောင်ရေ ၁၂၇ သန်း မွေးမြူထားသော လုပ်ကွက်ငယ်ကြက်မွေးမြူရေးသမားပေါင်း ၈.၂ သန်း အရွယ်အစားရှိ ဈေးကွက်ကို bot solution က လွှမ်းခြုံထားနိုင်မှုကြောင့် နည်းပညာပလက်ဖောင်း၏ ဩဇာသက်ရောက်မှု ကျယ်ပြန့်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။
UNDP-အော်ရီဒူး မိတ်ဖက်ပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ UNDP ဌာနေကိုယ်စားလှယ်အား တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခြင်း
UNDP-အော်ရီဒူး မိတ်ဖက်ပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ UNDP ဌာနေကိုယ်စားလှယ်အား တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Hackathon နည်းပညာပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၈ အနိုင်ရအသင်း - Divas အဖွဲ့
Hackathon နည်းပညာပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၈ အနိုင်ရအသင်း - Deca အဖွဲ့
Hackathon နည်းပညာပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၈ အနိုင်ရအသင်း - Blind Hat အဖွဲ့
UNDP ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ပီတာဘက်ချလာ၏ ၂၀၁၉ ကမ္ဘာ့သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အထိမ်းအမှတ်နေ့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းစကား
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ ၂၀၁၉ ကမ္ဘာ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အထိမ်းအမှတ်နေ့ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းစကား
UNDP မြန်မာအတွက် SIDA ၏ ပံ့ပိုးမှု
မြန်မာ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဌာနအတွင်း ခေါင်းဆောင်မှု ၊ ထိရောက်မှု ၊ လိုက်လျောညီထွေရှိမှု နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပီသမှုဆိုင်ရာ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့အကြီးအကဲ မစ္စ စစ်လ်ဗီးယား ဖလက်ချာ @UNDP_Myanmar @SIDA ၏ အရေးပါပုံကို ပြောကြားနေစဉ်။
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဌာနများ၌ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ခြင်း
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဌာနအတွင်း ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု မြှင့်တင်နိုင်ပုံကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ခင်ဆက်ရီက ပြောပြ သည်။ @Sida @DFAT ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို UNDP က အထောက်အပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
ငလျင်ဒဏ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သည့် လူထုအသိုက်အဝန်းတရပ်အဖြစ် မြှင့်တင်ခြင်း
နိုင်ငံအပေါ် သက်ရောက်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအနက် ဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိရေးအတွက် အကြီးဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုမှာ မြေငလျင်ဖြစ်သည်။ စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြော ၊ ကျောက်ကျွန်းပြတ်ရွေ့ကြော ၊ ကဘော်ပြတ်ရွေ့ကြောစသည့် ပြတ်ရွေ့ကြောများစွာပေါ် တည်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အန္တရာယ်မြင့် အုပ်စု၏ အဓိကအကြောင်းရင်းများတွင် ငလျင်ဘေးကျရောက်နိုင်မှုလည်း ပါဝင်သည်။
ဥရောပသမဂ္ဂ အရပ်သားပြည်သူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး စီမံကိန်းများ (ECHO) ၏ ရက်ရောသော ပံ့ပိုးမှုဖြင့် UNDP မြန်မာက “မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငလျင်လှုပ်နိုင်ခြေရှိ အရပ်ဒေသများတွင် ပိုကောင်းသော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု နှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုမှတဆင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းမြှင့်တင်ခြင်း ” ၁၈ လတာ စီမံချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ ငလျင်ကြောင့် အသက်သေဆုံးမှုများ လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်၍ သဘာဝဘေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာန၏ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ စီမံချက်တွင် ငလျင်လှုပ်နိုင်ခြေအရှိဆုံး တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ (ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး ၊ စစ်ကိုင်း နှင့် ပဲခူးတိုင်း ၊ ကချင်နှင့်ချင်းပြည်နယ်) နှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်နမိတ် (နေပြည်တော်) တို့ ပါဝင်သည်။
ငလျင်ဘေးတွက်ဆ၍ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်‌ရေး နည်းလမ်းများအား ပံ့ပိုးပေး ရန် UNDP မြန်မာ က ဗွီဒီယို စီးရီးများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများထံ သတင်းပေးပါ။
ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ငလျင် အသိပညာပေးဗွီဒီယို
မည်သည့်အချိန် မည်သည့်နေရာတွင် ငလျင်လှုပ်မည်ကို ခန့်မှန်းရန် မလွယ်ကူပေ။ ကျောင်းတက်နေစဉ် ဘေးကင်းလုံခြုံအောင် နေတတ်ဖို့ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ သိကြပါရဲ့လား? ဤဗွီဒီယိုတွင်ပါရှိသော ငလျင်ဘေးကင်းဝေး လုံခြုံရေး အကြံပြုချက်များကို ကလေးများအနေဖြင့် သင်ယူနိုင်ပါသည်။
ကျေးလက်လူထုအတွက် ငလျင် အသိပညာပေးဗွီဒီယို
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိ ငလျင်လှုပ်နိုင်ခြေရှိသော ဒေသများအနက် တခုဖြစ်သည်။ ငလျင်လှုပ်စဉ်အတွင်း မည်သို့ဘေးကင်းအောင်နေရမည်ကို ကျေးလက်ဒေသများတွင် သိရှိရန် အရေးကြီးသည်။ သင်၏ ရပ်ရွာလူထုထံ ဤဗွီဒီယိုအကြောင်း သတင်းပေးရန် မမေ့ပါနှင့်။
မြို့ပြတွင် ငလျင်ဘေးဒဏ်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သည့် လူထုအသိုက်အဝန်းတခုအဖြစ် မြှင့်တင်ခြင်း
ကမ္ဘာ့အဓိက ငလျင်ဇုန် ၂ ခုအနက် တခုပေါ်တွင်တည်ရှိသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငလျင်လှုပ်လွယ် သည်။ ငလျင်ဘေးအလားအလာ လျော့ကျရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးက ပဓာနကျသည်။ ငလျင်ကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးစေရန် ဤဗွီဒီယိုက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးနည်းလမ်းများကို သင့်အိမ်ဂေဟာအတွက် တင်ဆက်ပေးထားသည်။
ဗွီဒီယိုအင်တာဗျူး - UNDP မြန်မာ၏ နည်းပညာအကြံပေးအရာရှိချုပ် မစ္စ အန်ခီဒဲလ်နာ့စ်
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၅ ခုမှ နယ်မြေခံလူထုနှင့် မြို့နယ်ဦးစီးဌာနများကို စုစည်းတွေ့ဆုံစေပြီး အများသဘောဆန္ဒပြုစီမံကိန်းရေးဆွဲမှုပုံစံဖြင့် မြို့နယ်လိုအပ်ချက်များအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲရန်နှင့် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ရန် UNDP ၏ မြို့နယ် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး (TDLG) စီမံချက်က ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ ရက်ရောသောထောက်ပံ့မှုဖြင့် ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။ ဒါကတော့ TDLG စီမံချက် နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲ မစ္စအန်ခီဒဲလ်နာ့စ် က ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်!
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံရုံးမှ ပထမအတွင်းဝန် မစ္စတာ ခဲအိတာ အီဝဆဲ၏ ဗမာဘာသာစကားဖြင့် ဗွီဒီယိုအင်တာဗျူး
#JapanAid က ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့သော #ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မူလတန်းလွန်ကျောင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနတို့အား ဖွင့်လှစ်ပေးရန် လာရောက်ခဲ့စဉ်အတွင်း မြန်မာပြည်သူများအတွက် #မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ @ဂျပန်သံရုံး မှ မစ္စတာ ခေးအိတာ အီဝါးဆေး က ချစ်စရာ သတင်းစကားတခု ပါးခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ သံတွဲမြို့နယ် ၊ခမောင်းတုံကျေးရွာရှိ စံကိုက်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနား
ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ သံတွဲမြို့နယ် ၊ခမောင်းတုံကျေးရွာရှိ စံကိုက်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ဧပြီ ၄ ရက်နေ့၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ သံရုံးမှ ပထမအတွင်းဝန် ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဘဏ္ဍာရေး ၊ အခွန် ၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွါးရေးဝန်ကြီး ၊ လူမှုရေးရာဝန်ကြီး နှင့် UNDP ကိုယ်စားပြုတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရက ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် မြန်မာတို့ပူးပေါင်း၍ စံကိုက်ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ သံတွဲမြို့နယ် ၊ မြှာချောင်းကျေးရွာရှိ အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနား
ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ သံတွဲမြို့နယ် ၊ မြှာချောင်းကျေးရွာရှိ အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ဧပြီ ၃ ရက်နေ့၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသံရုံးမှ ပထမအတွင်းဝန် ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဘဏ္ဍာရေး ၊ အခွန် ၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွါးရေးဝန်ကြီး ၊ လူမှုရေးရာဝန်ကြီး နှင့် UNDP ကိုယ်စားပြုတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရက ဘဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် မြန်မာတို့ပူးပေါင်း၍ ဤအခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
UNDP ဌာနေကိုယ်စားလှယ်က အမျိုးသမီးများ နိုင်ငံရေးအတွင်းပါဝင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုမြှင့်တင်နေသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောကြား #အမျိုးသမီးများနေ့
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ #အမျိုးသမီးများနေ့ပါနော်! #မြန်မာနိုင်ငံ မှာ #ကျားမတန်းတူညီမျှမှု နှင့် အမျိုးသမီးများ လုပ်ပိုင်ခွင့် အားပေးမြှင့်တင်ဖို့အတွက် UNDP က အပြည့်အဝ သံန္နိဋ္ဌာန်ပြုထား ပါတယ်။ နိုင်ငံ့လူဦးရေ၏ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပေမဲ့ လွှတ်တော်အမတ် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပါတယ်။ UNDP ဌာနေကိုယ်စားလှယ် ပီတာဘက်ချလာ ပြောကြားတဲ့ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကတဆင့် အမျိုးသမီးများ နိုင်ငံရေးရာကိစ္စများတွင် ပါဝင်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုမြှင့်တင်နေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်း နားဆင်ကြရအောင် #IWD2019 #ပိုကောင်းဖို့မျှတစို့
ပိုကောင်းတဲ့ လူ့အသိုက်အဝန်း ၊ ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံ နဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာတခု ဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်သလဲဆိုတာ UNDP မြန်မာရဲ့ Project Analyst ဝါဝါမွန်က ခုလိုပြောပြပါ တယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် N-Peace ဆုရရှိသူ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်
#မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှုနှင့် ပဋိပက္ခအခြေအနေအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ၂၀၁၈ #NPeaceAwards ဆုရှင် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်၏ အရေးပေါ် #မိခင် #ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ အံ့မခန်းဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် ကလေး ဦးရေ ၂၃၀၀ ကို မီးဖွားမှုအား ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့သည်။
လိင်ကွဲပြားမှုနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်မှုအား ပဓာနမထားဘဲ အစိုးရဝန်ထမ်းများအား တိုက်တွန်းအားပေးရန် အရည်အချင်းဦးစားပေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးနေသည်ဖြစ်ရာ မြန်မာ့ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းဌာနများမှ အမျိုးသမီးများအပေါ် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ အာဆီယံ ရင်းမြစ်စင်တာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်နန်းဖြူဖြူပွင့် က မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားထားသည်။ #အမျိုးသမီးများနေ့ #IWD2019 #ကျားမတန်းတူညီမျှမှု